Jidka sida dhaqsaha badan si loogu badalo AVI in MP4 tayo sameecadda ah ee Mac / Win (Windows 10 taageerto)
Codsiyada warbaahinta Qaar ka mid ah iyo qalabka warbaahinta la qaadan karo ma taageeri AVI iyo u baahan tahay beddelaad, sida iPhone , iPod, iPad , HTC iyo wixii la mid ah, halka MP4 waa qaab video inta badan laga helaa dad badan oo aaladaha warbaahinta la qaadan karo sababta oo ah riixo sare iyo wax soo saarka leh tayo sare .
Weligaa doonayay Converter ah SAFE video in badasha AVI in MP4 Hillaaca degdeg ah, oo tayo leh dhawrsan? Maqaalkani waxa aad ku talin doonaa iyadoo Converter video weyn u Windows / Mac (Yosemite ka mid ah) si fudud loogu badalo AVI in MP4. Just aad u hesho hoos ku qoran.
Qeybta 1: Best AVI in MP4 Video Converter for Windows / Mac
Qeybta 2: AVI Free in Converter MP4
Qeybta 3: AVI Online in Converter MP4
Qeybta 4: Dooro AVI in MP4 Video Converter in aad xaq u leedahay in aad ka u
Qeybta 5: Extended Knowlege u AVI iyo MP4
Qeybta 1: Best AVI in MP4 Video Converter for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• Taageerada diinta kala duwan videos, sida AVI, MP4, MKV, MOV, iwm
• Personlize aad video la saamaynta cajiib ah.
• Mid ka mid ah-riix si ay u gubaan guriga video inay DVD la arrimo menu beatiful.
• Ku dar metadata in filimada, bandhigyada TV iyo videos guriga.
Sida loo Beddelaan AVI in MP4 la Wondershare Video Converter
Ka dib waa hage ku saabsan sida loo badalo AVI in MP4 in Windows. Haddii aad tahay user Mac ah, kaliya halkaan, aad u hesho tutorial ah Sida loo Beddelaan AVI in MP4 ee Mac .
Tallaabada 1 file Import (s) in software this
Tallaabada 2 Set MP4 sida qaab wax soo saarka
Riix icon Qaabka dhinaca midig oo dooro MP4 sida qaab wax soo saarka ka mid ah liiska qaab hoos-hoos u.
Fiiro gaar ah: codsiga Tani waxay sidoo kale taageertaa diinta files qalabka kala duwan, sida Apple, Samsung, HTC, Blackberry, iwm riix icon Device in ay doortaan qalabka sida aad doonayso inaad ka.
Tallaabada 3 bilow AVI in ay diinta ka MP4
Guji "Beddelaan" marka wax walba ayaa lagu wadaa, ka dibna MP4 in ay Converter AVI dhameystiri doona beddelaad si toos ah noo. Waxa kale oo aad la oggol yahay si ay u joojiyaan ama yara qaab beddelidda inta ay socoto. Waxaad sidoo kale riixi kartaa si aad u daawato video tutorial hoose.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaal Wondershare AVI in MP4 Video Converter for Windows
Appliction ha kartaa AVI diinta si xor ah u MP4 si fudud. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad xaalkaa videos iyo goobaha video qaybsiga download video.
1. Version ayaa lacag la'aan ah oo kaliya taageeraa diinta caadi videos.
2. Waxaad uma uu diyaarin kartaa qaab file saarka sida 3D, HD iyo qalab.
3. Xawaaraha Conversion u baahan in la hagaajiyo.
4. DVD looma shido in la taageeray, midkood.
Haddii aadan rabin inaad si loo soo dajiyo kasta oo codsiyo addtional on your computer, waxaad isku dayi kartaa AVI free online in Converter MP4 hoos ku qoran.
AVI Online in Converter MP4
AVI Free in Converter MP4
Best AVI in MP4 Video Converter
Qeybta 5: Extended Knowlege u AVI iyo Qaabka MP4
AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in uu kaydiyo video, audio ah, iyo dukaamada subtitles data.Since sida Lugood isticmaalaa qaab weel tan, oo loo isticmaalo la iPod iyo Playstation (PSP). Waxa uu noqdo qaab caan ah.
Sida loo dar SRT Cinwaan Faylal ay si AVI
Raadinta AVI ugu wanaagsan ee MP4 video Converter, kaliya isku day Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
Chromecast App liiska: Stream Local Video inay TV for Windows / PC / Android / macruufka
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVI in MP4 Iyadoo Loss Tayada Zero in Win / Mac (Yosemite ka mid ah)